Sothink Logo Maker v3.4 ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Sothink Logo Maker v3.4 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဘလော့လေးတွေ၊ဓါတ်ပုံလေးတွေ ပေါ်မှာ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့် Logo လေးတွေ လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ...!လုပ်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူပြီး မြန်မာဖောင့်လည်းရေးလို့ ရပါတယ်...! ကျွန်တော်အောက်မှာ ဒီကောင်လေးဖြင့် လုပ်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ တင်ထားပါတယ်...!သုံးရတာ အဆင်မပြေရင် Cbox မှာပဲဖြစ်စေ၊ Gmail မှဖြစ်စေ အော်သွားနိုင်ပါတယ်...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 20.47MB ရှိပါတယ်...!စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
ပိတောက်ပန်းလေးတွေကို "စန္ဒကူး" ဘလော့မှ ခူးလာတာပါ...!
3 Response to Sothink Logo Maker v3.4 ...!
လန်းတယ် ညီလေးရေ ...
ဒေါင်းသွားလိုက်ပြီ... အခုလိုမျှဝေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီ..
အိမ်လွမ်းသူ ရေ ဆော့ဝဲလေးဒေါင်းသွားတယ် .. ကျေးဇူးပါဗျာ